Zvinhu Zvehotera Kuve nekurudziro kubva kumitambo yekudya sadza Tainan tsika (guta rekare muTaiwan rizere netsika tsika), nekuvashandura kuita seti yezvinhu zvehotera, aya mitezo yemitambo yemafashamu inogara ichizivikanwa kune yepanzvimbo sekuti & quot; Marn & quot ;, zvinoreva kuzadzika mutsika dzechiChinese; turtle-rakabikwa mupunga keke sesipo ruoko uye sipo mundiro, mung bhinzi keke seimbudzi, tang yuan inotapira kurasa sezvo ruoko kirimu uye yakanyudzwa bun & amp; Tainan brown brown bun keke seti yakaiswa. Tsika dzeTainan tsika dzinogona kunge dzakapararira pasirese sezvo hotera ipuratifomu yakanaka kusimudzira tsika dzemuno.
Laminated Bamboo Chitsiko
Svondo 14 Kukadzi 2021
Laminated Bamboo Chitsiko Kala, chitsiko chakagadzirwa mu lamuredhi bamboo ine chinodzoreredzwa mushandirapakati pakati axis. Kutora mafuta-mapepa amburera chimiro senge kufemerwa kwayo, yakaremerwa bamboo dhiza raive rakabikwa rakabikwa uye rakapetana fafitera mune yehuni huni yakarongedzwa muchimiro, ichiratidza kupfava kwayo uye inoyevedza kukwezva. Sezvineiwo kunakirwa kwechimiro chakaumbwa bamboo chakagadzirwa uye chinodzoreredzwa muchimiro chepakati, mumwe anowana mukana kana akagara paKala stool, ichaburuka zvinyoro-nyoro uye mushe, uye kana munhu asimuka kubva paKala stool, inokwira ichidzokera kunzvimbo yayo. .
Kufema Kudzidzira Mutambo
Kufema Kudzidzira Mutambo Icho chidhina-chakaita sedhiza dhizaini yemazera ese kuitira kuti munhu wese abatsirwe nekugara achifema kudzidziswa kukwidziridza kugona kwemapapu nekufemera bhora kuti ipfuure nemakaravhani ane nzvimbo dzakasiyana dzekutarisa inhale uye exhale yemhepo. Iwo matipi anouya akasiyana module, anochinjika uye achichinjika. Iyo yemagineti michina dhizaini yakagadzirirwa muvaki yekufema iyo inopa shanduko kuti ikwane imwe yemamiriro ekufema.
Chishanu 12 Kukadzi 2021
Fenicha Yakaiswa ChuangHua Tracery yakakodzera kune imba deco, nzvimbo yekutengesa, hotera kana studio iyo yayo yakasimbirwa yakafuridzirwa naChuangHua, iyo Chinese windows grilles maitiro. Kushandisa simbi simbi yekukotamisa tekinoroji uye pendi kuturika pendi mune yakajeka yeruvara ruvara kurongedza kunze nechena chena iyo yakajekesa fesheni yayo yaitaridzika, ichivaita vakasununguka kubva pasimbi simbi yemifananidzo yakaoma, inotonhora uye inorema. Aesthetically yakapfava yakachena uye yakashambidzika muchimiro chayo chakagadzirwa, kana mwenje uchipfuura nepakati laser yekucheka tracery, mumvuri unofungidzirwa kumadziro wakapoterera nepasi unoratidza kupenya.
China 11 Kukadzi 2021
Yekudzidzira Yekutamba Kubatsira vana kunzwisisa zvinangwa zvebudiriro zveupenyu papasi, kuchengetedzwa, kuchengetedza uye kudzoreredza masango. Miti mienzaniso yakafanana neTaiwan epamhepo huni marudzi eakacia, musidhari wezvinonhuwira, Tochigi, Taiwan fir, camphor muti, uye Asia fir. Kubata kwakapusa kwemapuranga akagadzirwa, hwema hwakanakisa hwemhando imwe neimwe yemuti, uye nzvimbo yakakwirira yemarudzi akasiyana emuti. Bhuku rine mifananidzo rinobatsira kudzika midzi midzi vana nepfungwa yekuchengetedza masango, kudzidza kusiyana pakati pemarudzi emuti weTaiwan, kuunza pfungwa yekuchengetedza masango nebhuku remifananidzo.
Chitatu 10 Kukadzi 2021
Electra Faucets Chishanu 5 Kurume
Osoro Yakavhurika Tafura Sisitimu China 4 Kurume
Coca-Cola Tet 2014 Kuputira Zvokunwa Zvakapfava Chitatu 3 Kurume
Zvinhu Zvehotera Laminated Bamboo Chitsiko Kufema Kudzidzira Mutambo Fenicha Yakaiswa Yekudzidzira Yekutamba Kunze Simbi Simbi